Brendan Taylor - latest cricket news, match reports & comment
Brendan Taylor Cites Family Welfare For County Move
Former Zimbabwe batsman Brendan Taylor stated that his move to Nottinghamshire sacrificing his international career was to safeguard the interests of his family.
Brendan Taylor Announces Zimbabwe Retirement
Wicket-keeper batsman Brendan Taylor will be playing his final game for Zimbabwe on Saturday when his side takes on India in the World Cup Pool B clash in Auckland.
Zimbabwean captain Brendan Taylor struck 93 to help his side reach stumps on the first day of their only Test against South Africa in Harare on 248 for nine.
Zimbabwe Prevail In Another Tight Game
Zimbabwe kept their hopes of qualifying for the main stage of the ICC World T20 alive after defeating the Netherlands in a last-ball thriller in Sylhet - their second in three days.
Ireland Scramble To Victory Over Zimbabwe
Ireland scrambled a bye from the final ball of a competitive ICC World Twenty20 2014 Group B game against Zimbabwe to score a three-wicket win in Sylhet.
Cricket World Player Of The Week - Brendan Taylor
There can be only one winner of this week's Cricket World Player of the Week award. Zimbabwe's captain Brendan Taylor almost single-handedly led his side's batting in the Test win over Bangladesh in Harare, becoming the first Zimbabwe captain to score a century in each innings of a Test match.
This week's award goes to Brendan Taylor, who has hit two centuries in the past week, albeit in losing causes, in doing so becoming the first Zimbabwean to hit back-to-back tons. The 25-year-old from Harare has been the rock upon which Zimbabwe's successful return has been built and the captaincy of the side appears to have only increased his already not insignificant hunger for runs. He can only hope that his current rich vein of form continues and that the rest of his teammates can follow his example.
Zimbabwe captain Brendan Taylor has been named as the Cricket World Player Of The Week after he scored a half-century and a century in leading his side to a Test win over Bangladesh. Taylor was appointed as skipper for Zimbabwe's return to Test cricket following six years on the sidelines and he delivered in style.
Brendan Taylor Named New Zimbabwe Captain
Brendan Taylor has been named as Zimbabwe's new captain and he will lead the side for their upcoming one-day tri-series hosting Australia 'A' and South Africa 'A'. "We have watched Taylor develop into a mature, experienced player and we stand fully behind him in his new role," Zimbabwe Cricket (ZC) Managing Director Ozvias Bvute said.